Miovaova DC Inverter
Natao 0 ℃ fandidiana
Miaraka Aquark ihany-mandroso ny teknolojia Inverter DC sy ny kalitao singa, Mr. Eco Tena miovaova DC inverter dobo hafanana paompy amin'ny fifaninanana vidiny. Manana fanaraha-maso amin'ny alalan'ny hafanana marina samihafa ny fanafanana fahafahana. Rehefa dia mahazo mari-pana dobo akaikin'ny setpoint, dia heats ny dobo amin'ny hafainganam-pandeha ambany izay manome ambony fahombiazana (COP) sy ny hetsika mangina.
COP hatramin'ny 11
Mr. Eco dia afaka manitsy ny fanafanana araka ny mari-pana dobo filomanosana. Rehefa mihazakazaka amin'ny 20% -25% hafainganam-pandeha, dia mahatratra ny COP11 ambony indrindra. Amin'ny ambany-mihazakazaka haingana filozofia, Mr. Eco dia avo roa heny noho ny angovo hamonjena On / Off hafanana paompy.
Noho ny miovaova Mr. Eco DC inverter rafitra fanaraha-maso, DC inverter compressor sy ny hafainganam-pandeha miova ventilator, Mr. Eco mitantana tena mangingina izay hanome anao ny aina fanafanana tontolo iainana.
Amin'ny fanaraha-maso APP marani-tsaina, azonao atao ny manamarin na mifehy ny Mr. Eco na aiza na aiza.
Atoa Eco Azo ampiharina amin'ny R32 na R410A mandatsa-dranomaso.
Self-fanitsiana mba hifanaraka amin'ny hery miovaova famatsiana, noho izany dia afaka ny ho malefaka isan-karazany 180 ~ 260V.
Start avy 0 Amps ny laharana Amps hatrany. Tsy misy ny trano zozoro rafitra herinaratra.
Eo ho eo amin'ny 50% COP Speed 8.8 9 9.2 9.1 9.1 9.2
Eo ho eo amin'ny 50% COP Speed 5.9 6.1 Anarana 6 6.1 Anarana 6.1 Anarana 6.2
Miasa rivotra mari-pana ( ℃ ) 0℃ ~ 43 ℃
Herin'aratra 230V / 1 PH / 50Hz
Misy laharana fahan'ny fahefana (KW) 0.23~1.16 0.28~1.55 0.41~2.01 0.50~2.56 0.60~3.26 0.72~3.81
Dreninao fahefana ny 50% Speed ​​(KW) 0.42 0.53 0.75 0,9 1,15 1.29
Misy laharana fahan'ny ankehitriny (A) 1.0~5.06 1.21~6.73 1.76~8.70 2.17~11.12 2.61~14.16 3.13~16.56
Maximum fahan'ny ankehitriny (A) 6.5 8 12.5 17 19.5 20
Power tady ( mm² ) 3 × 1.5 3 × 2.5 3 × 2.5 3 × 4 3 × 6 3 × 6
Sound anivon'ny amin'ny 1m dB (A) ~ 39,8 51,2 41,6 ~ 53.5 43.9 ~ 54,0 ~ 46,2 57,3 ~ 46,3 58,1 ~ 46,9 58,7
Sound ambaratonga ny 50% haingana 1m dB (A) 43,8 46.8 49,5 49,7 50,6 51,1
Sound anivon'ny amin'ny 10m dB (A) 19,8 ~ 31.2 21,6 ~ 33.5 23.9 ~ 34 26.2 ~ 37,3 26.3 ~ 38,1 26.9 ~ 38,7